Bakteeriyo ayaa ka dambeysey carruurtii ku xanuunsatay Alanya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bakteeriyo ayaa ka dambeysey carruurtii ku xanuunsatay Alanya
La daabacay torsdag 8 augusti 2013 kl 09.33
Waxaa soo baxay natiijadii baaritaanadii lagu sameeyey carruurtii calool-xanuunku ku dhacay iyagoo jooga dalka Turkiga. Waxaana loo badinayaa in bakteeriyada nooca loo yaqaan shigella ay sababtay caluul-xanuunkaas ka dillaacay hoteelka ay shirkadda Fritidsresor ku leedahay magaalada Alanya ee Turkiga, halkaas oo ay laba toddobaad ka hor ku xanuunsadeen carruur halkaa dalxiis ku joogey.
Waxaana lagu ogaadey natiijooyinkii ka soo baxay baaritaano laga qaaday dhawr ka mid ah carruurtaas oo kala yimid dalalka Iswiidhen iyo Noorwey. Sidaasna waxaa sheegay Machadka ka hortagga cudurada faafa ee af-iswiidhishka loogu yaqaan Smittskyddsinstitutet.
Bakteeriyada noocaan ah waxaa lagu yaqaan in ay ku milanto saxarada oo si fudud u fiddo kadibna ay keento xanuuno ay ka mid yihiin shuban bakteeriyo wata.
Waxaa la tuhunsan yahay in ay bakteeriyadaani ku faafay waaskadii ay carruurtu ku dabaalaneysey. Waxaa bakteeriyadaan la xanuunsaday 38 carruur ah oo hoteelka degganaa oo ay kala bar oo bar ka yimaadeen Iswiidhen.